Ndị na-eme nkwekọrịta nhicha n'ime United States
Ndị na-eme nkwekọrịta nhicha n'ime Mason
Ndị na-eme nkwekọrịta nhicha n'ime Ohio
Anyị bụ azụmahịa obodo na -anya isi n'ọrụ anyị! Ọ bụrụ na ị hụrụ ụlọ dị ọcha n'anya mana ọ naghị akpọ asị ọcha! Anyị nwetara gị !! Covid-19 gbaara ama maka nsị na mmetọ! Afọ 17 nke ahụmịhe Ọkachamara na nkwanye ugwu Ije ozi GREATER DAYTON/na Mba. Mpaghara m. Anyị na -enye ihe niile
Ebiputara site na Amy
nlele Ndị na-eme nkwekọrịta nhicha Bipụtara 2 years ago